Esikhathini esidlule, ngabona sengathi udadewethu owayesebenza nami wayenokuzikhukhumeza futhi engibukela phansi; angikwazanga ukuzibamba kodwa ngaya ngokuya ngicwila esimweni esingalungile. Ngaqala ukuzibeka ezimweni ezingikhandlayo ngenxa yakhe. Ngahluleka ukungakunaki lokhu emsebenzini wami; nasekukhulumeni kwami nganginokuzithoba kulokho engikwenzayo kangangokuba, emva kwesikhathi, ngangiye ngibuke ubuso bakhe uma ngikhuluma noma uma ngenza okuthile, futhi ngangingathwele umthwalo womsebenzi wami. Ngangiphila ebumnyameni ngokuphelele. Ngangingakwazi ukuzikhipha ngisho noma ngangazi ukuthi isimo sami sasiyingozi. Phakathi kokuhlupheka, ngathandaza kuNkulunkulu kaninginingi, ngase ngicabanga: Khuluma nodadewenu nivulelane izifuba, nithole indlela eya ekukhanyeni. Kodwa uma ngifika phambi komnyango kadadewethu, ngafikelwa umcabango owehlukile: Uzothini udadewethu uma engizwa ngimtshela ngalokhu? Ingabe uzothi ngigcwele izinto eziningi ezingatheni engqondweni yami, athi ngiyinkinga nje, futhi ngilukhuni kakhulu ukusebenza nami? Ngithe uma ngifikelwa yilo mcabango, kwaba sengathi ngibone engibuka ngandlela thile, ngendlela enokungenyanya. Ngokushesha, isibindi sami sashabalala kanjalo ngavele ngabuna, kwaba sengathi umzimba wami wonke ubanjwe yijaqamba. Aphinda futhi amazwi kaNkulunkulu angilethela ukukhanyiseleka ngaphakathi: “Uma unezimfihlo eziningi ongabazayo ukuziveza, futhi uma ungafuni ukudalula izimfihlo zakho—okusho ukuthi, izinkinga zakho—kwabanye ukuze ufune indlela yokukhanya, ngizothi uyilowo ongeke ayithole kalula insindiso futhi ongeke aphunyuke kalula ebumnyameni” (“Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngazama ukuzikhuthaza buthule: Yima isibindi, ungenzi izinto lukhuni futhi uvuleleke. Ukwenza iqiniso akuyona into ongazenyeza ngayo! Kodwa futhi ngaleso sikhathi, omunye umuzwa owawuphikisana nalowo walokhu ungibelesele: Ungasho lutho—abanye abantu bacabanga ukuthi awunankinga. Uma ukhuluma ngakho bazocabanga ukuthi ugcwele izinto eziningi engqondweni yakho bangabe besakuthanda. Hhayi! Kungcono ukuzithulela-ke! Ngenkathi ngithithiza nginjalo, ngacabanga: Ukuba ngumuntu othembekile kuchaza ukuthi akufanele ube namahloni nokwesaba! Nokho, ngale nkathi ngiqala ngithola amandla, amanye amacebo kaSathane aqubuka futhi: Uma ukhuluma ngakho abanye abantu bazokwazi ukuthi ungubani ngempela, emva kwalokho-ke uzohlala ulusizi! Inhliziyo yami ngokushesha yasongana. Kwaba ngale ndlela ukuba inhliziyo yami idonseleke emuva naphambili empini ephakathi kokuhle nokubi, okumnyama nokumhlophe. Ngangazi ngokucacile: Ukungafuni kwami ukukhuluma kwakuyisifiso sami sokuzivikela ngingaphoxeki. Kodwa ngale ndlela, isimo sami ngeke sisombululeke futhi kwakungenanzuzo emsebenzini wami. Ukufuna ukuxoxisana nokuhlanganyela kuphela okwakungasombulula le nkinga kuzuzise nomsebenzi wami futhi ngihambisane nentando kaNkulunkulu. Kodwa uma nje ngifikelwa yilo mcabango wokuthi uma eke wezwa, angase angithathele phansi, ngaphelelwa yisibindi sokwenza iqiniso. Ngazizwa sengathi uma ngingakhuluma ngobubi bami, kwakusengathi ngangingeke ngisakwazi ukuqhubeka nokuphila! Okwesikhashana ngazizwa nginokuthukuthela okukhulu, futhi nenhliziyo yami yaba sebuhlungwini obukhulu kwaba sengathi ishiswa umlilo. Ngavele ngaphihlika ngakhala, ukuphela kwento eyayingisalele kwakuwukuthi ngikhale ngicele usizo kuNkulunkulu enhliziyweni yami. Esikhathini esibucayi, amazwi kaNkulunkulu aphinda akhanya engqondweni yami: “Akufanele bangabi nalo iqiniso, futhi akufanele bafihle ubuzenzisi nokungalungi…. Intsha kufanele ibe nesibindi ingavumi ukucindezelwa amandla obumnyama nokuguqula ukubaluleka kokuba khona kwayo” (“Amazwi Aya Kwabancane Nabadala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angivumela ukuba ekugcineni ngikwazi ukuthulisa inhliziyo yami eyaluzayo: Noma kwenzekani, ngeke ngiphinde ngibe into yokudlala uSathane! Ngeke ngiphinde ngimelane noNkulunkulu; kufanele ngilahle umina ngiphile iqiniso. Lapho sengithole isibindi sokufuna udadewethu futhi saba sesivulelana izifuba saxoxisana naye, imiphumela yakwedlula kude lokho engangikulindele. Akugcinanga nje ngokuba udadewethu angangibukeli phansi, kodwa wahlambuluka ngokukhohlakala kwakhe, wazindla wabuye wakubona ukusilela kwakhe wayesexolisa kimi, ethi esikhathini esizayo, lapho siba nenkinga kufanele sibe nokuhlanganyela ngeqiniso sobabili ukuze sifinyelele ekuqondaneni, sithathe ukulalela iqiniso njengesimiso sethu, omunye afunde emandleni omunye ukuze sinqobe ubuthakathaka bethu, senze umsebenzi webandla ndawonye. Yaphela kanje leyo mpi eyayingenazikhali. Inkinga yami yayisisombululekile, futhi inhliziyo yami ngayizwa ilula. Lapho ngicabanga emuva empini enzima inhliziyweni yami ngaleso sikhathi, kwaba lapho kuphela lapho ngabona khona ubucayi nobuze bokufuna kwami ukungabonakali ngiyisiwula. Kwakuyingxenye yempilo yami kangangokuthi ngangiphila ebumnyameni, ngibhekene nokubiza okulandelanayo kukaNkulunkulu kodwa ngingakwazi ukuphunyuka. Ngangiliqonda iqiniso kodwa ngingakwazi ukulenza; ngempela ngase ngikhohlakaliswe ngokujulile uSathane! Ngaphinde ngakuqonda kahle ukuthi ukwenza iqiniso kanye nokuba ngumuntu othembekile akulula neze.
Okwedlule：Ukuqala Indlela Yokukholwa KuNkulunkulu
Okulandelayo：Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso